सप्तरी । देश र जनताको सेवा गर्न पठाइएका जनप्रतिनिधि जुधेपछि उनीहरुबाट के आशा राख्ने ? एउटा सानो विषयमा वि’वाद हुँदा झ’ग’डा गर्नेले देशभित्रका जनताको मर्का के बुझ्छन् ? सुन्दा पनि लाज !
प्रसंग हो, सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको । मंगलबार किसानका लागि ल्याइएको बिऊ बिजन वितरण गर्ने कार्यक्रम थियो । वितरण कार्यक्रममा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष उपस्थित हुने नै भए ।
तर, उनको कुरा अध्यक्ष मण्डलले मान्दै मानेन् । त्यसपछि विवाद सिर्जना भयो । बिऊ बिजन वितरण गर्ने विषयको वि’वाद अन्ततः गा’ली’ग’लौ हुँदै हात’पातको स्थितिमै पुग्यो ।
रि’स’ले चु’र भएकी उपाध्यक्ष मण्डल अध्यक्ष मण्डलमाथि जा’इ लागिन् । कुर्सी उचालेर अध्यक्षमाथि प्रहार गर्न थालिन् । अध्यक्ष पनि के कम उनले पनि कुर्सी उचालेर उपाध्यक्षमाथि प्रहार गर्न थाले ।
दुबैबीचमा कु’टा’कु’ट’कै क्रममा उपाध्यक्षले अध्यक्षको दुईवटा दाँत नै भाँ’चि’दि’इ’न् । दाँत भाँ’चि’ए’प\_छि र’गत बग्न थाल्यो तैपनि अध्यक्ष कु’ट’पि’ट’बाट हटेनन् । कु’ट’पि’टकै क्रममा अध्यक्षको हातमा पनि चो’ट लागेको छ ।
कु’ट’पि’ट’का क्रममा अध्यक्षको दाँत भाँ’चि’ए पनि उपाध्यक्षको हातमा मात्र चो’ट लागेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।
अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीका हुन् भने उपाध्यक्ष त्यहीँ पार्टीबाट विभाजित भई निर्माण भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका हुन् ।
मंगलबार किसानका लागि कृषि शाखा कार्यालयबाट गाउँपालिकाको बजेटबाट खरिद गरि ल्याइएको ५ सय बोरा बिऊ बिजन कसरी वितरण गर्ने भन्ने निर्णय नभई कु’टा’कु’ट भएको थियो । न्युज24 बाट
२०७८ मंसिर २१, मंगलवार १७:०६ 1 Minute 219 Views